Wasaarada Dastuurka oo u bandhigtay guddoomiyaha Baarlamaanka caqabadaha ka hortaagan dib u eegista Dastuurka | Sagal Radio Services
kulanka ayaa waxaa looga hadlay halka ay marayaan hanaanka dib u eegista Dastuurka, wada shaqeynta guddiyada Dastuurka iyo wasaarada Dastuurka.
Wasaarada Dastuurka ayaa soo bandhigtay intii uu kulanka socday cutubyada lagu guuleystay in dib u eegis lagu sameeyo iyo kuwa hada ay dib u eegista ku socdaan.
Sidoo kale wasaarada Dastuurka ayaa soo bandhigtay jadwalka shaqada ee la xiriira howlaha dib u eegista iyo caqabadaha hor taagan in qodobada qaar dib u eegis lagu sameeyo.
Wasiir ku xigeenka wasaarada Dastuurka ee xukuumada Soomaaliya Mudane Xuseen Cabdi Cilmi ayaa sheegay in wasaarada Dastuurka ay wado dadaaladii ugu dambeeyay ee dib u eegista loogu sameynayo.
“Runtii wasaarada dadaal ayay wadaa, golaha shacabka waxaan ka codsanayaa in wasaarada Dastuurka iyo guddiyada dhisan inaad kala shaqeysaan howlaha culus ee horyaalla, si loogu guuleysto in Dastuur loo dhan yahay aan yeelano”. Ayuu yiri wasiir ku-xigeenka wasaarada Dastuurka.
Guddoomiye ku xigeenka Labaad ee golaha shacabka Mudane Mahad Cabdalla Cawad ayaa kulanka ka sheegay in ay muhiim tahay in si wadajir ah loo wada shaqeeyo.
“Wasaarada iyo qubaradu aad bey u mahadsan yihiin wixii xog ahaa wa la kala helay maanta waana la is wareystay, waxa aan ka hadleyno waa masiirka umadda Soomaaliyeed, hadii aan la iska kaashan oo aan la istaageerin laguma guuleysanayo howlahaan socda”. Ayuu yiri guddoomiye Mahad Cabdalla Cawad.
Guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan oo kulanka soo xeray ayaa ku dheeraaday muhiimada Dastuurka iyo dardar gelintya howlaha dib u eegista.
Guddoomiyaha ayaa wasaarada Dastuurka faray shaqooyinka ay wadaan inay sii Labada jibaaraan, golaha shacabkana ay u soo gudbiyaan warbixin dhameystiran si waqtiga haray loogu faa’iideysto.
“Golaha shacabka waxa uu matalaa shacabka Soomaaliyeed, warbixinta aad maanta na siiseen ma ahan mid aan ku qanci karno mana aqbaleyno in howsha dib u eegista ay sidaan ku sii socoto, waxa rabnaa inad la timaadaan qorshe cad, golaha shacabka waxa uu diyaar u yahay inuu idiinla shaqeeyo habeen iyo maalin”. Ayuu yiri guddoomiyaha golaha shacabka.